အတားအဆီးမဲ့တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ အတူ Vivo ရဲ့ S1 - Myanmarload
အတားအဆီးမဲ့တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့ အတူ Vivo ရဲ့ S1
လွန်ခဲ့သော ၆ လ က 13:37 July 23, 2019
ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်မှု နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးကို ကြည့်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်ဟာ ပေါ့ပါးသွက်လက် ဝံ့ကြွားနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ Vivo S1 မှာ ဘယ်သူမှ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြာနဲ့ ခရမ်းကို တွဲစပ်တားပြီး စိန်ပွင့်သဏ္ဍန် အကွက်တွေနဲ့ အတူ အနက်ရောင်လေး ကိုပါ ဝန်းရံလိုက်တော့ ဖြိုးဖြိုးဖျက်ဖျက် တစ်လက်လက် ဖြစ်နေမှာကို မြင်ရောင်ကြည့် လိုက်တော့နော် ။ နောက်တစ်ရောင်ကတော့ Skyline Blue အပြာနုရောင် ရောင်ပြေးလေးက စိတ်ကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စေတယ်။
ကင်မရာ အတွက်ရော ဘယ်လို MP တွေ ပါဝင်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး အံ့သြဖွယ် ရုပ်ထွက်တွေ ရရှိစေမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စောင့်မျှော်ကြရအောင်နော်။ ထူးခြားတာ တစ်ခုကတော့ ကင်မရာကို 108° အထိချဲ့လို့ ရနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ vivo ချစ်သူများ အနေနဲ့ နောက်ထပ် စဉ်းစားရမယ့် အချက်တစ်ခုကတော့ ဂိမ်းဆော့လို့ ရလား ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်လို ROM မျိုးတွေ တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် မိုဘိုင်းဂိမ်းတွေအတွက် အရမ်းမြန်ဆန်စေနိုင်တာလဲ ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုပါပဲ။
4500mAh Battery နဲ့ Vivo ရဲ့အမြန်အားသွင်းစနစ် ပါဝင်ထားတာကြောင့် Battery အတွက် စိုးရိမ်တွေးပူ နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ Smart Button ကို တစ်ချက်နှိပ်ရင် Google Assistant ၊ နှစ်ချက်ဆက်တိုက် နှိပ်ရင်တော့ Jovi Image Recognizer ပွင့်လာမှာဖြစ်လို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်ပါသလဲ ??? အော် … တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော် .. ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ်အလိုက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတယ် ဆိုတာကတော့ တခါတည်း အသိပေးလိုက်ပါရစေနော်။ Vivo ရဲ့ S1 လေးကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ စောင့်မျှော်ရင်း အားပေးလိုက်ကြပါစို့ ….
Page generated in 0.0856 seconds with5database query and6memcached query.